Amarkii socdaalka ee madaxweyne Trump oo mar kale la horjoogsaday – idalenews.com
Muqdisho (INO) Mar kale ayaa la hor istaagay amar uu dhowaan soo saaray madaxweynaha Marekanka,kaaso diidayay lix waddan oo muslim ah dadka ka soo jeeda inay soo gaalaan Marekanka,wixii maanta ka dambeeya.
Xaakim heer federaal ah oo ka shaqeeya gobolka Hawaii, ayaa amarka si kumeel-gaar ah u joojiyay,waxaana qorshuhu ahaa amarka madaxweynaha inuu maanta hirgal noqdo,balse ma noqon doono maaddama si kumeel-gaar ah loo hor istaagay.
Garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo ku sugan Minnesota oo la hadlayay idaacadda VOA-da wuxuu sheegay xaakim heer federaal ah oo ka shaqeeya gobolka Hawaii go’aanka ka soo baxay inuu fursad u siinayo dadka soo gali lahaa Marekanka inay yimaadan.
“Inta uu soo baxayo amar kale oo go’aanka xaakimka ka hor imaanaya,dadka way imaan karaan,”ayuu yiri Garyaqaan Cabdinaasir .
Madaxweynaha Marekanka ayaa loo arka inuu mar kale cadaadis la kulmayo,maaddama la hor istaagay go’aanka uu ku joojiyay qaxootiga iyo dadka ka imaanaya lix waddan oo Muslim ah.
Trump oo amarkii hore dhowaan dib ugu laabtay,wuxuu ka saaray waddanka Ciraaq oo toddobo ku ahaa waddamada laga mamnuucay Marekanka.